Ajụjụ - Vecano Electronics Co., Ltd.
Mgbe akara ekwentị mkpanaaka na-arụ ọrụ, ụfọdụ ekwentị mkpanaaka na-egosi akara. Gịnị kpatara nke a?
Mgbe ngwaọrụ nchebe ekwentị na-arụ ọrụ, enwere ohere abụọ maka mgbaàmà gosipụtara na ekwentị mkpanaaka:
Nke mbụ bụ na enwere ike ijikọ ekwentị mkpanaaka. Ọ bụrụ na enwere ike ijikọ ekwentị mkpanaaka, ọ pụtara na mpaghara mkpuchi ahụ erubeghị ọta dị irè ma enwere ọnya mmiri. Mgbe ahụ, ọ pụtakwara na ngwaahịa ndị na-echebe ekwentị mkpanaaka gị ugbu a enweghị ike izute ihe mkpuchi nke saịtị gị;
Otu bụ na ekwentị mkpanaaka enweghị ike ijikọ. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ọ pụtara na ekwentị mkpanaaka nọ n'ọnọdụ dị oke egwu, nke a na-eme na ekwentị mkpanaaka na nnyonye anya siri ike na nnukwu uche.
Enwere m ike ịga n ’surfntanetị mgbe ekwentị mkpanaaka ụlọ akwụkwọ gbochiri?
N’oge ugbu a, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ etinyegoro ihe eji egbochi ekwentị. Mgbe agbanwudoro ọta ahụ, ndị otu ụmụ akwụkwọ enwere ike ịntanetị?
N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ụzọ atọ iji si na ịntanetị na ekwentị mkpanaaka.
Wayzọ mbụ bụ ịfụfụ viantanetị site na akara nke onye ọrụ ekwentị. Ozugbo agbanyere ngwaọrụ mkpuchi, ekwentị mkpanaaka enweghị ike ịnweta akara nke onye ọrụ, nke na-eduga na enweghị ike ịkpọ oku ma ọ bụ ozi ederede, ma enweghị ike ịbanye na naturallyntanetị. Ọta ahụ dị irè.
Secondzọ nke abụọ bụ ijikọ ekwentị mkpanaaka na WIFI iji sọfụ ịntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ, jammer anaghị arụ ọrụ nke ikpuchi ọwa 2.4gwifi, mgbe ahụ, na-ekele gị, ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịkpọ na ederede ederede, mana enwere m netwọkụ na ụwa, olu QQ na WeChat na vidiyo ka nwere ka emee, ikiri ihe nkiri na igwu egwu abughi nsogbu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ngwaọrụ mkpuchi na-akwado ọrụ mkpuchi wifi, mgbe ahụ, enweghị ike ịnweta inntanetị na nke a, na ikpuchi ahụ dị irè.
Thirdzọ nke atọ bụ ịnyefe ọdụ ụgbọ mmiri LAN nke wired netwọk ozugbo na ekwentị mkpanaaka. Usoro a dị ka ịbanye ụwa nke onye ọ bụla, dịka kọmputa nke ejikọrọ na eriri netwọk, n'agbanyeghị ma emepee ọta ma ọ bụ na emepeghị, enweghị nnyonye anya, na ọsọ ntanetị dị mma. Mana ọ bụrụ na enweghị LAN interface na netwọkụ dị na mpụga, a ga-akpọ ya ọ bụghị kwa ụbọchị, ọ gaghị arụ ọrụ.
Ka o sina dị, isi ọrụ dị ka nwa akwụkwọ bụ ịmụ akwụkwọ, rụsie ọrụ ike ma mụọ ihe ike, ọdịnihu gị bụ ọdịnihu nke ala nna.
Gini mere na enweghi ihe mgbaama no na ugbo elu?
Agbanyeghị na akpọrọ jammer mgbaama mgbama "jammer", ọ bụ nnoo akara mgbaama "jammer" na jammer dị ike.
Ihe kpatara na enweghị ike iji ekwentị mkpanaaka na ụgbọ elu bụ igbochi akara ngosi ekwentị na-egbochi nkwukọrịta ụgbọelu. Wụnye "jammer" pụtara ịwụnye nnukwu nnyonye nnyonye anya. Ya mere, a gaghị enwe ụdị ngwaọrụ ahụ n'ụgbọelu ahụ!